Na-Hackers 'aka anya gị iCloud
A otutu anyị ada azụ iCloud na-esochi nke anyị niile data; Otú ọ dị; ị maara nke loopholes na nche? Ị na-ewere otú mfe hackers nwere ike imebi gị iCloud akaụntụ? Ịnweta gị iCloud data naanị kwesịrị a na aha njirimara tinyere a paswọọdụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere n'ezie ike paswọọdụ, hackers ga-enwe ike inweta ntinye gị usoro na mgbe ha nwere ohere gị iCloud data, ọ dị mfe maka ha na-akpatara ụfọdụ isi mmebi na ọbụna ehichapụkwa gị data na-adịgide adịgide nakwa .
E nwere otutu ọnọdụ ụfọdụ ebe siri chere ihu iwe nke hackers dị ka mma. Otu onye dị otú a ma ama merenụ bụ na metụtara ute Honan, bụ onye a bụbu ntinye aka ka Gizmodo na ọbụna ihe nchịkọta akụkọ na Wired magazine dị ka mma. Hackers-eji arụrụala ike algọridim agbaji ya na akaụntụ n'ikpeazụ ọ Ezuru ya niile photos, ozi ịntanetị, akwụkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ na dị mkpa faịlụ dị ka mma.
Ọ bụghị naanị na ute Honan, e nwere ọtụtụ nke siri ndị chere ihu iwe nke iCloud foto leaks. Top EBIONITISM siri dị ka Jennifer Lawrence, Kaley Cuoco, Jill Scott na otutu ihe ama gosikwara na ha foto e leaked. Maa, ị na-achọghị na ihu otu nsogbu na otú anyị ga-eso na n'elu ụzọ nke i nwere ike na-hackers anya gị iCloud.
Chebe gị iCloud akaụntụ
Mgbe ị na-achọ iji chebe gị iCloud akaụntụ na ị chọrọ ịnọgide na hackers pụọ, ebe a bụ ụfọdụ nke dị iche iche nzọụkwụ nke gị mkpa iji mejuputa.
1. Họrọ ihe ị na-echekwa
Ị nwere nhọrọ nke ị na-ahọrọ faịlụ na ị ndabere na gị iCloud. Ọ bụrụ na ị nwere faịlụ nke bụ oké mwute na nzuzo, ma eleghị anya ọ na-kasị mma gwara ọ bụghị ndabere ha na iCloud. Iji inyocha nkọwa nke ihe ị na-akwado, ị chọrọ ịga ntọala na nkwaghari iCloud.
Ị nwere ike ịhụ ndepụta nke dị iche iche ngwa ọdịnala nke na-akpaghị aka na-kwadoo ma ha ozi zigara iCloud. Ị nwere ike Toggle na gbanyụọ n'etiti ndị a ngwa ọdịnala na họrọ ihe ị ga-ndabere. Hapụ idenye aha faịlụ na ndị chọrọ nlezianya.
2. Ịtọgharị paswọọdụ gị
Arụrụala ike bụ otu n'ime ndị nkịtị iche nke agha nke na-eji hackers n'ihi inweta ohere gị iCloud. iCloud adịghị akpọchi ndị mmadụ na ọbụna mgbe ugboro ugboro ọma mgbalị. Bụ nke a mere hackers nwere ike ịnọgide na-agbalị iche iche n'ịgwa ruo mgbe ha adaa n'elu nri otu. Nke a bụ ya mere i kwesịrị iji tọgharịa paswọọdụ gị site n'oge ruo n'oge. Ị kwesịrị ị na-agbalị na-enwe ezi paswọọdụ. Jide n'aka na-paswọọdụ random na ọbụna mgbe, anyị ga-arịọ gị ịgbanwe ya na mgbe etiti oge. Ọzọkwa, gị nche ajụjụ kwesịrị ịbụ ihe siri ike ịgbawa.
3. The abụọ na-akpata Nyocha
Nke a bụ otu n'ime ụzọ kacha mma nke na-egbochi arụrụala ike ọgụ ma si otú a na-egbochi hackers si inweta ntinye gị usoro. Inwe a abụọ na-akpata Nyocha bụ oké ụzọ nke na-edebe gị usoro nchebe. Iji mejuputa akụkụ a, na-eso nzọụkwụ a.
Bugharịa m Apple ID na mgbe ahụ isi 'jikwaa gị Apple ID na banye'. Ugbu a, ịkwaga 'họrọ paswọọdụ na nche'. Họrọ abụọ nzọụkwụ nkwenye wee pịa on 'ina juru'. Ozugbo i tụgharịa ya on, oge ọ bụla ị nbanye gị Apple id, ị ga-enweta a paswọọdụ na gị họọrọ ngwaọrụ.
Oge ọzọ ị na-nbanye gị Apple id, ị ga-enweta a paswọọdụ na onye gị na ngwaọrụ na paswọọdụ kwesịrị ka a banyere nbanye ọma.
N'agbanyeghị ihe ndị a niile atọ nzọụkwụ, anyị ga-ikwu ihichapụ gị onwe foto site na iCloud na-adịgide adịgide mere na ọ bụrụ a hacker ọkọkpọhi n'enweghị ikike ohere, ha agaghị enwe ike inwe ohere gị onwe photos.
Olee ka ihichapụ foto site na iCloud na-adịgide adịgide?
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ niile Chọpụta nke foto na-adịgide adịgide, ebe a bụ ihe nke ị chọrọ ime.
Ihichapụ foto ndị si na-akọrọ iyi
1. Mbụ niile mkpa ka ị na-aga photos ngwa na mgbe ahụ na ala nke ihuenyo, ị ga-ahụ ihe na akara ngosi na-akpọ 'na-akọrọ'. Enweta na otu ihe ahụ.
2. Site ndepụta nke ga-egosipụta, ị nwere ike ihichapụ ha nile keere òkè iyi. Ị nwere ike ma kwaga ọ bụla nke miri-iyi na ihichapụ ha ma ọ bụ ị pụrụ nanị na-ahọpụta ndị edit mode na mgbe ahụ họrọ niile red buttons na ihichapụ dum nke iyi.
Ihichapụ foto ndị si m foto iyi
1. Gaa foto m na ngwa na wee pịa na album icon emi odude na ala.
2. Ị ga-ahụ a na nchekwa na-akpọ 'ndị m foto iyi'. Họrọ niile foto a na nchekwa ma hichapụ ihe niile nke ha.
Ozugbo foto ndị a na-ehichapụ si gị niile Apple ngwaọrụ, ọ pụtara na ị na-ehichapu ha si iCloud dị ka mma. Nwere bụ onye ọzọ nzọụkwụ nke gị mkpa ime.
Disabling iCloud ndabere
Unu na-eme n'aka na ị gbanyụọ akpaaka ndabere nke foto na vidiyo gị iCloud nkesa. N'ihi na nke a na-eme, na-aga mwube gị na ngwa na mgbe ahụ kwaga iCloud na n'okpuru na, isi photos. Ugbu a, gbanyụọ ma foto iyi na foto nkekọrịta. Nke a ga-egbochi ihe ọ bụla ọzọ-akwado nke ihe oyiyi gị iCloud.
Na a dị mfe nzọụkwụ, ị nwere ike tufuo foto gị echekwara na iCloud.
3 Ụzọ nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android
> Resource> iCloud> Nọgidenụ The Hackers 'aka Off Your iCloud